Midowga Afrika Oo Sheegay In Ay Dib U Celin Doonaan Sannadkan In Ka Badan 15,000 Oo Muhaajiriin Ah Oo Ku Xayiran Liibiya
(Hadhwanaagnews) Thursday, December 07, 2017 14:19:27
Addoonsiga casriga ah ee liibya ayaa soo jiidatay dareenka caalamka ka dib markii muuqaalada laga soo daayay warbaahinta CNN
Guddoomiye ku-xigeenka Midowga Afrika ayaa sheegay in ururka iyo waddamada xubnaha ka ah ay dib u celin doonaan in ka badan 15,000 oo muhaajiriin ah oo ku xayiran Liibiya dhammaadka sanadka.
Sida laga soo xigtay ilo saxaafadeed, inta u dhaxaysa 400,000 iyo 700,000 oo muhaajiriin Afrikan ah ayaa ku jira xerooyin dhawr ah oo ku yaala dalka Liibiya.
Hay'adda Caalamiga ah ee Socdaalka ayaa sheegtay in in ka badan 423,000 oo muhaajiriin ah ay ku suganyihiin waddanka waqooyiga Afrika, kuwaas oo badidoodu ka soo jeedaan dalalka saboolka ah ee wadamada Afrika ee ka hooseeya saxaraha.
Addoonsiga casriga ah ee liibya ayaa soo jiidatay dareenka caalamka ka dib markii muuqaalada laga
soo daayay warbaahinta CNN ay muujiyeen soogalootiga afrikaanka oo lagu kala iibsanayo lacag yar oo ah $ 400.
Kumanaan muhaajiriin ah ayaa ku sii socda Liibiya iyaga oo rajeynaya in ay ugu dambeyntii gaaraan Yurub iyaga oo u maraya Badda Mediterraneanka, kuwa oo marar badan la kulma kahataro badan iyo xadgudubyada ka dhanka ah bani'aadamnimada ee tahriibiyeyaasha.
Intii lagu jiray shirkii Midowga Yurub-Afrika ee Abidjan todobaadkii hore, hoggaamiyayaasha Afrika iyo kuwa Yurub ayaa soo saaray qorshe gurmad degdeg ah oo loogu talagalay muhaajiriinta, iyada oo lagu heshiiyay in laga soo saaro ugu yaraan 3,800 oo qof oo ku xayiran mid ka mid ah in ka badan 40 xarumood oo lagu hayo dalka Liibiya.
Morocco, Faransiiska, iyo Jarmalka ayaa soo bandhigay inay bixiyaan diyaaradahooda hawada.